Nhau - K-Tek & Exhibition
Mushure memakore gumi ekuvandudza, K-Tek haina chete ine huwandu hukuru hwevashandi uye hwehunyanzvi vashandi uye rakanakisa manejimendi timu, asi zvakare ine yakanakisa timu yekutengesa. Kuitira kuti vatengi vazhinji vazive isu, tinogara tichienda kupasi rose kunotora chikamu mukuratidzira, senge United States, United Kingdom, Germany, Japan zvichingodaro. Takasvika pakuziva huwandu hwakawanda hwevatengi kubva pachiratidziro, vanogutsikana nemhando yezvigadzirwa uye nebasa, panguva imwecheteyo, vatengi vazhinji vekunze vakauya kuzoshanyira K-Tek fekitori uye nekukurukura nyaya dzekudyidzana. kukurudzira kwatiri. Isu tinotarisirawo kupa yakakwira-mhando machining masevhisi kune vamwe vatengi vanoshaya. Tinokukoka nemwoyo wese kuti ushandire pamwe nekukura pamwechete
Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aruminiyamu, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki enjiniya uye mamwe marudzi esimbi simbi, Tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi:
1) 5 Sekaiichi CNC machine / CNC hwokugaya hwakabvira / CNC Turning ；
2) EDM Kucheka waya / WEDM-HS / WEDM-LS ；
chaiyo simbi yekupedzisa:
• Anodize (Zvakajairika / Zvakaomarara)
• Zinc yakanamirwa pamifananidzo (Nhema / Olive / Bhuruu / ……)
• Passivation (Simbi isina simbi)
• Jecha nenyunje
K-Tek Machining inopa OEM / ODM masevhisi, Tinogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, zvemagetsi, zvemotokari, zvekurapa, simba nyowani uye mimwe minda. Iyo kambani ine yakakwana chaiyo yekugadzirisa michina uye yakasimba yemhando manejimendi manejimendi system, mhando yezvakanaka zvikamu inogona kusangana neepasirese indasitiri zviyero, zvigadzirwa zvinotengeswa mhiri kwemakungwa.
K-Tek inyanzvi mune chaiyo michina zvikamu kugadzira. Specialty Yakabatanidzwa masevhisi akaremekedza hunyanzvi uye maitiro. Mainjiniya edu achashanda newe kuti uve nechokwadi chakanyanya dhizaini yekugadzira uye musangano. Kunaka kwazvo kushandira vatengi uye kugutsikana zviratidzo zvekambani yedu uye hwaro kubhizimusi redu kubudirira. Unogamuchirwa kubvunza: sales@k-tekmachining.com Nhare: (+86) 0769-88459539